प्रधानमन्त्री ओलीको स्वा’स्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल नपुगेका प्रचण्ड किन पुगे शीतल निवास ? – Life Nepali
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वा’स्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल नपुगेका प्रचण्ड किन पुगे शीतल निवास ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ११ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण’ अस्पताल’ महाराजगञ्जमा’ भर्ना भएर बसेका छन् । यही फागुन १९ गते सोमबार साँझ’ अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री’ ओलीको दुई दिनपछि’ बुधबार मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘ओलीको स्वा’स्थ्यमा सुधार आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री’ ओली अस्पताल रहँदा सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल’ दाहाल प्र’चण्ड पनि रु’घाखोकी’ र ज्वरो’ आएर खुमलटारस्थित’ आफ्नै’ निवासमा स्वास्थ्य’ लाभ गरेर बसे ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई’ अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट भेट्न टिचिङ पुगेका’ प्रचण्ड त्यसयता गएका छैनन् । रुघाखोकी र ज्वरो आएका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई’ भेट्न गएनन् । तर, बुधबार (फागुन २८)गते भने प्रचण्ड राष्ट्रपति’ विद्यादेवी’ भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे । मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएर अस्पतालमा स्वास्थ्य’ लाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नगएका प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न गएको विषयले राजनीतिमा चर्चा पाइरहेको छ । मुलुकको राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको भन्दै केही समय अघि सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली दुई चार दिनमा डिस्चार्ज हुने प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले जानकारी दिएकी छन् । साथै राम्ररी सक्रिय भएर प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न ६ महिना लाग्ने डा. शाहले बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली लामो समय आराम गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइपछि प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन् । ‍
Previous श्रीमतीको नाम लिएर च्याटमा घुस मागेको बारे पर्यटनमन्त्री भट्टराईले दिए यस्तो स्पष्टीकरण
Next छोराछोरीको जीवन प्रमुख कि परीक्षा? केही हप्ता पर सार्दा कुन आकास खस्छ? बाबुराम भट्टराई
27 mins ago Life Nepali